Ring of The Miner Mod 1.17.1/1.16.5 (Smash All The Blocks Around) ~ McModes
McModes > Mods > Ring of The Miner Mod 1.17.1/1.16.5 (Smash All The Blocks Around)
Ring of The Miner dia Mod ho an’ny Minecraft 1.17.1 / 1.16.5. Raha ketraka ianao amin’ny fandehanana any amin’ny toeram-pitrandrahana satria mety maharitra fotoana be izany, ary mila fitaovana ianao hanampy anao hanapaka fotoana sy hampitombo ny fahombiazany rehefa mankany amin’ny toeram-pitrandrahana, dia afaka manampy anao amin’izany ny Ring of the Miner!
Vakio bebe kokoa amin’ny
Ring of the Miner dia manampy zavatra amin’ny Minecraft miaraka amin’ny anarana mitovy amin’ilay mod. Ny Ring of Miner dia singa matanjaka be. Mila vy 2 ianao, orina volamena 2, orina diamondra 2, orja emeraoda 2 ary bar volamena 1 hamoronana azy.
Ny fanondroana ny peratra mpitrandraka dia hanome anao fanazavana momba izany. Ny Miner’s Ring dia afaka mamaky tampoka ny sakana manodidina ny mpilalao. Izy io dia afaka mamaky hatramin’ny sela 11x5x11 manodidina ny mpilalao. Ankoatr’izay, azonao atao ny mampiasa azy io araka izay itiavanao azy ary tsy hamela anao hamoy fo. Izy io dia afaka mamaky saika ny sakana rehetra ankoatry ny vitsivitsy, toy ny vatom-patana, ny sakana tsy matevina ary ny mineraly. Io no tena ilana azy amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany satria afaka mamaky vato, tany, vatokely ary mamela anao mineraly.
Ny mod dia manana maody 2 ihany koa.
Ny maody mahazatra dia rehefa tsindrio havanana ianao, dia manaparitaka ireo sakana manodidina anao. Ny maody void dia rehefa tsindrio ny bokotra shift + totozy ankavanana. Maody tsy misy fa tsy manapotika sakana, dia hanjavona ireo sakana. Ny maody banga dia tena ilaina tokoa raha tsy tianao ho fenoina haingana ny boatyo.
Ring of the Miner Mod fametrahana
Sintomy ary apetraka ny kinova farany an’ny API lamba SY Fabric Modloader
Sintomy ary apetraho ny Forge API
DOWNLOAD Ring of the Miner Mod (kinova voafantina etsy ambany)
Apetraho ao anaty lahatahiry ilay mod na sintonina ./minecraft/mods/
Ho fanampin’izay, azonao atao ny mametraka ny Mod Menu
Ring of the Miner Mod Download rohy
ho an’ny Minecraft (lamba) ⇒ 1.17.1 + 1.16.5 + 1.15.2
Mpanoratra: kwpugh | Pejy loharano: CurseForge
ho an’ny Minecraft (Forge) ⇒ 1.16.5 + 1.15.2 + 1.14.4
Ny lahatsoratra Ring of The Miner Mod 1.17.1 / 1.16.5 (Kapohy ny sakana rehetra) niseho voalohany tamin’ny PackMods.